‘च च हुई’, फिल्म भित्र कुन पात्र कस्तो ? « Intro Nepal
‘च च हुई’, फिल्म भित्र कुन पात्र कस्तो ?
Published On : ४ मंसिर २०७६, बुधबार ०९:५२
मङ्सिर ६ गते शुक्रवारबाट फिल्म ‘च च हुई’ सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउँदैछ । फिल्ममा चार क्यारेक्टर प्रेम अर्थात् आर्यन सिग्देल, भोला अर्थात भोलाराज सापकोटा, संगीता अर्थात् मिरुना मगर र श्यामलाल अर्थात माओत्से गुरुङ मुख्य भूमिकामा छन् । पछिल्लो समय लभ स्टोरी जनरका फिल्ममा देखिदै आएका अभिनेता आर्यन सिग्देलको रमकम जनरको फिल्ममा देखिएका हुन् । दुई बेकामिले युवाको जीवनमा एउटा किताबले ल्याउने उतारचढावलाई यसमा रमाइलो तरिकाले चित्रण गरिएको छ ।
फिल्म भित्र कुन पात्र कस्तो ?
प्रेम (आर्यन सिग्देल)
नेपालबाट सानैमा हङकङ पुगेको छन्, प्रेम । काम र लाइफलाई सिरियस रुपमा नलिने प्रेम मोज मस्तीमै मस्त छन् । उनको जीवनमा कुनै उदेश्यनै छैन नत जीवनमा कोही । उनका नातेदार भनौ वा साथि भोलानै छ । जो उनिसंगै काम गर्छन । यिनै प्रेम एउटा परिस्थिति सिर्जना भएपछी नेपाल फर्किन्छन् । नेपाल फर्किएर उनी हिमाल पुग्छन । त्यसपछि उनको जीवनले नयाँ मोड लिन्छ ।
भोला (भोलाराज सापकोटा)
भोला नाम आफैमा भोला छ । तर, उनको नाम अनुसार अनुहार र जिउडाल मिलेपनि व्यबहारमा कतै भोलापन छैन । केही काम राम्रोसंग आउदैन, हरेक काममा आलोकाचो । जीवनमा केही गर्न खोजेपनि उनलाई साथ् दिने कोही छैन । त्यसैले भोला पनि हङकङबाट प्रेमसंगै नेपाल फर्किन्छ । र, प्रेमको सुख, दुखसंगै हरेक परिस्थितीमा संगै हुन्छ ।
संगीता (मिरुना मगर)
संगीता राम्री छिन् । हिमालमा हुर्केकी संगीता देखिदा जति सुशील छिन्, त्यति नै चिन्दा छुच्ची । काठमाडौँ बसेर पढ्ने उनलाई परिस्थितीले त्यस्तो बनायो । उनी पढाइ सकेर हिमाली भेगमै फर्किन्छिन् । त्यसै क्रममा उनको भेट प्रेमसंग हुन्छ । त्यसपछि उनको जीवनमा सुरु हुन्छ च च हुई ।
श्यामलाल (माओत्से गुरुङ)
मान्छे हेर्दा उमेरले पाको देखिए पनि श्यामलाल रमाइला छन् । उनले आफुलाई बाहेक अरुसबैलाई ढाटेका छन्, ठगेका छन् । श्यामलाल रमाइला भएपनि गैरकानुनी काम गर्छन् । उनले एउटा किताबलाई पुर्याउने जिम्मा प्रेम र भोलालाई दिएका हुन्छन् । समयमै किताब भनिएको ठेगानामा नपुगेपछि त्यही रमाइलो म्यानले आफ्नो भिलेन रुपलाई अगाडी ल्याउछन् ।
जीवनको पिङ च च हुई गरेर मच्चिन खोज्दा आउने अवस्थालाई फिल्ममा देखाइएको हो । आर्यन र भोला हङकङमा काम गरिरहेका दुई युवाको भूमिकामा छन् भने मिरुना हिमाली भेगको युवतीको भूमिकामा छिन् । फिल्ममा निर्देशन र सम्पादन साम्तेन भुटियाको रहेको छ । फिल्ममा पुस्कर गुरुङ, आर्जेस रेग्मी, बबिता मल्ललगायतको अभिनय पनि रहेको छ । फिल्म रोमान्टिक कमेडी जनरमा तयार भएको हो भने यसलाई एजीएल इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा अमृत घोले लामाले निर्माण गरेका हुन् । व्यवसायी घोले यसैफिल्म मार्फत निर्माणमा आउँदैछन् । यसमा सुशन प्रजापतिको छायाँकन रहेको छ भने, पटकथा सिजन दाहाल र सन्देश अर्यालले लेखेका हुन् । फिल्मका गीतमा राजनराज शिवाकोटी र रोशन थापाको संगीत छ । फिल्ममा श्री श्रेष्ठको द्वन्द, शिशिर खातीको कोरियोग्राफी, सुजिल कर्माचार्यको ब्याकग्राउण्ड स्कोर रहेको छ । फिल्मलाई उपत्यकामा रिच इन्टरटेनमेन्टका करण श्रेष्ठ र मोफसलमा एफडी कम्पनिले वितरण गर्नेछ ।
फिल्मका बारेमा निर्देशक साम्तेन भुटिया भन्छन्, ‘मैले निर्देशन गरेका अघिल्ला फिल्म भन्दा यो फरक जनर हो । मैले यसपटक कमेडी रोजेको हुँ । फिल्मले दर्शकलाई बाध्छ भन्नेमा टिम विश्वस्त छौ । मैले फरक फिल्म गर्ने भन्दा पनि फरक कन्टेनलाई रोजेको हुँ ।’ ‘आफुलाई आर्टमा भन्दा पनि हरेक जनरमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । कथा अनुसार हामीले काम गर्ने हो । त्यसैले यसपटकको विषयवस्तु अनुसार मैले पात्र पनि चयन गरेको छु र फिल्म पनि त्यही अनुसारको छ । हाम्रै कथालाई केही फरक प्रस्तुती दिएर दर्शकको मनोरंजनको लागि तयार गरेक छौ’, निर्देशक भुटियाले भने ।
त्यस्तै फिल्मलाई लिएर अभिनेता आर्यन सिग्देल भन्छन्, ‘साम्तेन दाई खासमा मलाई फुल कमर्सियल निर्देशक लाग्यो । उहाले गर्ने काम आर्टको भएपनि दिमाग पुरै व्यावसायिक छ । यसमा मेरो पात्रले पूर्ण रुपमा दर्शकलाई मनोरंजन दिन्छ ।’ दर्शकले हेर्न चाहेको जस्तो भूमिकामा आफु देखिएको र फिल्मले मनोरंजनसंगै हिमाली सुन्दरतालाई पनि देखाउने आर्यनको भनाई छ । ‘दर्शकको समय र पैसा सदुपयोग हुने फिल्म हाम्रो टिमले तयार पारेको जस्तो लागेको छ’, आर्यनले थपे ।
यसै फिल्म मार्फत फिल्म निर्माणमा होमिएका अमृत घोले लामाले निर्माताको रुपमा च च हुई मार्फत डेब्यु भएको भएपनि आफु नेपाली फिल्मको राम्रो दर्शक भएको बताए । ‘मैले केही समयको पर्खाइपछि निर्माणमा आएको हुँ र यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु । म व्यवसायमा रहे पनि नेपाली फिल्ममै राम्रो निर्माताको रुपमा पहिचान स्थापित गर्न चाहन्छु । नेपाली दर्शकले खोजे जस्तो फिल्म मेरो प्रोडक्सन हाउसबाट ल्याउने कोसिस गर्नेछु,’ उनले भने ।